Notantanan-dreniny izy io no nihemotra tampoka ilay fiarabe teo am-piakarana akaikin’ny orinasa Sabma, fokontany Amborompotsy, kaominina Ambanivohitra Talatamaty, ao amin’ny distrikan’Ambohidratrimo. Maty tsy tra-drano teo imason’ny reniny niteraka azy ilay zaza.
Raha ny fanadihadihan’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Ambohidratrimo izay nanatanteraka ny fizahana ifotony ka nandray an-tanana ny raharaha dia voalaza fa olana mahakasika ny hisatra no nahatonga ny loza. Efa natolotra ny fianakaviany ny razana, taorian’ny fizahan’ny mpitandro filaminana, raha ny fampitam-baovaon’ny zandary avy ao amin’ny kaompania Ambohidratrimo. Nilaza ny mponina eny amin’ny manodidina fa tsy mbola nahitana tranga toy izao teny an-toerana fa vokatr’io fahasimbana tsako-kodiarana io no nahatonga ny loza izay tampoka. Ilay renim-pianakaviana afaka nitsoaka tampoka fa tsy nahavotra ny menaky ny ainy, raha tsy izany saika faty roa sosona no nitranga teo an-toerana.